Ngokuqhelekileyo siva ukuba "entsha indala ekhohliweyo", ubulumko obunjalo bujongene nefashoni namhlanje. Khumbula i-80 yenkulungwane yokugqibela, ngoko i-leggings yafika kwifashishini, kwaye namhlanje ukuthanda kwabo kubuyele. Ngokuqinisekileyo, batshintshile encinci - ngoku bebukeka bekhetheke nje kuphela njengento ebalulekileyo yomfanekiso, kodwa bancedisa ngokugqibeleleyo isethi esipheleleyo kunye neengubo ezimnandi, iimeko zokugqoka kunye neengubo ze-denim.
Ziziphi iilggings? Ezi ngqungquthela zenziwe ngendwangu e-elastic ehambisana nemilenze, ayinayo i-zippers, amaqhosha kunye nezinye izinto ezingenasidingo. Ukwahlukana kwabo kuphela kwiintonga - abazigubungeli ezinyaweni.
Ukubonakala kweempawu zenzeke kwi-"Chanel" bonisa umklami uKarl Lagerfeld. Eyathandwa kakhulu ngelo xesha, uMadonna noSandra bavumile le mibhobho engeyiyo emgangathweni, kwaye ngoko ke abalandeli besifazane bathenga iimpahla ezifanayo. Isiqingatha sababhinqa baseRashiya babizwa ngokuba ngamacwecwe alolu hlobo.
Kwiminyaka engamashumi amathathu edlulileyo, isalathisi se-leggings yayenziwe kwaye i-color scale yayinzima. Kwiminyaka elishumi kamva, le mibhobho yavela emapokothini, yafudumala, kwaye umbala ulula kwaye uyathula. Kodwa ukugqithwa kweeggings kwaphuma emva kokuvavanywa kweengcali zentambo yaseJamani. Bavezela ukuthukuthela kwabo kule mibala, njengoko i-leggings yayingabonakali ukusilela kwebhinqa, kwaye nangona kunjalo - bagxininisa ngokupheleleyo, kungekhona imilenze.
Yintoni enokugqoka ngeeggings?
Ifashoni entsha isasazeke kwindlela yokudala ye-leggings, kunye ne-sporty. Ngoko makhe sifumane okokugqoka kwii-leggings.
Iifoto ze-panties ezinemibala engahambelaniyo zihambelana neengubo "ezenziwe ngesikhwama" okanye i-shirt-shirt. Futhi i-skirt-skirt-short-skirt-short-skirt, i-short skirt. Ukuba ufuna ukufihla ezinye iimpazamo emilenzeni yakho, gqoka ii-leggings ngeempuphu ezinde.
Ukhetho olulungeleyo luya kuba yi-leggings eneengubo ezide njenge-sweater: le meko yeklasi iyenzeka kakhulu imihla ngemihla, kwaye kwiimeko ezithile.
Ukugqoka kunye neendwangu ezimnyama zeflethi kunye ne-raincoat, awuyi kulahleka - lo khetho luyi-stylish kwaye lukhululekile ukugqoka nsuku zonke. Amantombazana angacingi ukuba angenazo izithende kufuneka agqoke ama-knickers afanelekileyo kunye neentlobo ze-ankle kunye ne-trapeziform cape. Iingubo ezimfutshane ezimhlophe kunye ne-leggings zibukeka kakuhle ngohambo lwangokuhlwa.
Kwigqoko leqela elinemiguqo, unako ukuhlanganisa iifutshane, isambatho esifutshane okanye ingubo engaphethiyo, kodwa ibhulukwe ngokwayo ingaba nemibala eyahlukileyo, umzekelo, ingwe okanye inyoka yeenyoka, kunye nemihlobiso eyahlukileyo.
Iingqayi ezinama-leggings zinokugqithiswa nantoni na, ukuqala ngeebhola kunye nokugqitywa kwezibhothi ngeesithende okanye kwiibhotile zesikhumba. Kodwa musa ukudibanisa kunye nezibhokisi ze-ugg.
Ukubeka kwi-leggings phantsi kweengubo, ungakulibala ukuhambelana nombakala ubude obungenani amasentimitha amabini.
Unokugqoka iifutshane zombala ofanayo kwi-leggings. Le nhlanganisela yenza kube lula ukugqoka iifutshane kungekhona kuphela ehlobo, kodwa nakusibusika, kubaluleke kakhulu - ubude beeggings abufanele ukuba bufutshane.
Iingcebiso zabaqulunqi ziza kukunceda ukhangele enkulu kunoma yikuphi ukudibanisa kunye nelayings:
Xa ukhetha isambatho esongezelelweyo seendwangu, khawuqwalasele ubude bemveliso. Izihlangu, iingubo, iimpahla zokugqoka akufanele zibe zilingana kunye nelayings.
Amantombazana anesiphako kumfanekiso, kufuneka anikezele ukufutshane (ukuya emadolweni). Umbala weebhulukhwe unemiqathango emininzi, kodwa kukulungele ukuyeka imibala emnyama ye-monochrome.
Izibhengezo ezimbi kakhulu ezi bhulukwe.
Ukuba ukhetho lwakho luwela kwi-leggings ezibonakalayo, ungagqoki iimpahla zombala ofanayo kunye nabo. Oku kusebenza kwizixhobo zokusebenza.
Ingqungquthela yasehlotyeni i-leggings-capri, ifutshane kwaye, mhlawumbi inemibala ekhanyayo. Benza umfanekiso wakho ube mncinane. Ukubeka kwi-capri-skirts enje nge-skirt encinane, uya kujonga isitayela.
Xa uthengisa i-leggings, khawuqwalasele inketho nge-lace trim. Zihamba kakuhle ngeengubo zokukhanya zasehlobo, i-slippers okanye i-flip-flops.
Kwimozulu epholileyo, unxibe iingubo zesitayela esiklasini okanye phantsi kwesikhumba sakho, ukhetho lwesibini lukhethwa ngabasetyhini abaninzi befashoni, ekubeni olu hlobo lweeggings lubonakaliso lwe-chic.
Kwakhona kukho i-leggings yezemidlalo - ilula ngakumbi kuneentambo zezemidlalo eziqhelekileyo, i-leggings-trousers kunye neepokotshi, zenziwe ngumbumba onobukhulu.
I-Leggings inokudibaniswa neengubo zangaphandle ezahlukeneyo, nje ukunamathela kumgaqo wokuba ufikelela kwisiqingatha somlenze.
Yintoni enxiba ngayo izidada ezinqeni?
Imfashini, indlela yokukhetha isitayela sakho kwiingubo
Izinto eziphambili ze-TOP-3 ze-wardrobe-i-2017
Isitala seLatye kwiingubo
Izambatho eziphathekayo zoshishino lwabasetyhini
Ikhefu elide kakhulu e-Ukraine
Ndifuna ukuhlala ngokuvuya ngonaphakade
Yintoni ongayenza ukuba awufuni ukuhlala
Imveliso eluncedo ekulahlekeni kwesisindo
Indlela yokuqalisa iphalaji ekudleni komntwana?
Ishokolethi yebhisikidi kwi-multivark
Patties nge salmon
Indlela yokunxibelelana namadoda kwi-intanethi
Ukondla umntwana ngobisi lwebele
I-Forecast ye-scorpion yonyaka we-tiger 2010
Izakhiwo ze-clover eziwusizo
Yintoni eyenza ukufakwa kwezipikili
Iimpawu kunye nokutya kwe-pancreatitis